Archive du 20191202
Naina sy Rina 5113 monja ny elanelam-bato
Mandresy i Naina Andriantsitohaina amin’ny fifidianana ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra, raha ny vokatra navoakan’ny CENI.
Fanirisoa Ernaivo « Gadrao ny CENI fa mpandika lalàna »
Efa hita tamin’ity fifidianana filoha sy depiote daholo ireo hosoka sy hala-bato tamin’ity fifidianana ity saingy ny fandeferana sy fisorohana ny korontana,
Fahalainan’ny mpifidy Manome vahana ny politika maloto
Raha oharina tamin’ny fifidianana solombavambahoaka teo dia ambany dia ambany ny taham-pandraisana anjara tamin’ny fifidianana kaominaly raha manodidina ny 25% izy hatreto, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko politika,
Andranomavo-Soalala Feno bileta tokana mialoha ny vata mangarahara
Mpikambana miisa 5 tao amin’ny birao fandatsaham-bato tao amin’ny biraom-pifidianana iray ao amin’ny fokontany Antsirabe, kaominina Andranomavo,
Fanavaozana ny lisi-pifidianana Ilaina ny fandraisan’anjara ny rehetra
Araka ny voafaritry ny lalàna dia ny 01 desambra no hanokafana indray ny lisi-pifidianana hahafahana manao ny fanavaozana.
Kandidan’ny IRK Mitady hanao bodongerona any amin’ny sisiny
Re ankehitriny fa mitady hanao bodongerona sy tery vaimanta ireo kandida IRK na dia efa resy mazava be izao ary.
Fifidianana feno lesoka Tezitra amin’ny CENI ny olona
Nisokatra nanomboka omaly 1 desambra ho an'ny olompirenena ny lisi-pifidianana, izay azo jerena sy hamarinina isam-pokontany. Araka ny lalàna, isan-taona,
Antenimieram-pirenena Tsimbazaza Ny Irk maro an’isa indray no manondrana
Nahagaga ny mpanara-baovao politika eto amintsika fa ireo solombavambahoaka mpanohatra toa an-dry Fidèle Razarapiera avy any Ambatondrazaka sy ireo
Fanavaozana ny lisi-pifidianana Nanomboka omaly eny anivon’ny fokontany
Nanomboka omaly alahady 01 desambra 2019 ka hatramin’ny 15 mey taona 2020 ny fanaovana ny lisi-pifidianana hiantsorohan’ny komity eny ifotony misahana ny fifidianana na ny “commission electorale des electeurs”.
Edito Ny firenena no resy
5 andro izay no vita ny fifidianana. Ao anatin’ny fiandrasana izay mety ho valin’izany ny rehetra ankehitriny.
Harena ankibon’ny tany “Be loatra ny tataon-ketra”, hoy i Ahmad Mohamad
Tao anatin’ny ora valo no nandinihan’ireo solombavambahoaka ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ho amin’ny taona 2020 (LFI 2020) ny sabotsy lasa teo.
Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana Andrasana ny akony amin’ny toekarena
Lany teny anivon’ny Antenimieram-pirenena ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin’ny taona 2020. Nolanian’ireo solombavambahoaka tetsy amin’ny lapan’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza tamin’ny sabotsy farany teo izany.
Naivo Raholdina “Tsy ekena ny tandrevaka amin’ny ny fitantanam-bolam-panjakana”
Andrasana ny akon’ny fandaniana ny lalànan’ny fitantanam-bola amin’ny vahoaka Malagasy, hoy ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina, voafidy teny amin’ny boriborintany faha-5.
Fiatrehana ny loza voajanahary Hanome 50 tapitrisa dolara ny Banky Iraisam-pirenena
Hotontosaina amin’ity volana desambra ity ny famoaham-bola 50 tapitrisa dolara avy amin’ny banky iraisam-pirenena, izay tohana ara-bola ho an’i Madagasikara.
Madagasikara Mbola ezaka be ny fampananan’asa ny tanora
‘Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny sabotsy lasa teo ny seraben’ny asa andiany fahatelo tany amin’ny distrikan’i Farafangana faritra Atsimo Atsinanana izay natrehan’ny minisitry ny asa ny fampananana asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy,
Foara VIDY VAROTRA Lasan-dRandriamanantena Eric ilay tany mirefy 300 m²
Nifarana omaly alahady rehefa naharitra efatra andro ilay foara Vidy Varotra andiany faha-11 notanterahina tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina.
Mpampianatra FRAM Hampitomboina ho 15.000 ireo raisina ho mpiasam-panjakana
Hampitomboina ho 15.000 isa ireo mpampianatra FRAM raisina ho mpiasam-panjakana amin’ny taona 2020 ho avy io, hoy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika ary ny fanofanana arak’asa Rtoa Volahaingo Marie Therese raha 8.500 teo aloha.
Mananara Avaratra Vehivavy bevohoka teraka teny ambony sambo
Vehivavy bevohoka iray nitaingina sambo niainga tao Mananara Avaratra hihazo an’i Soanierana Ivongo no teraka teny ambonin’ity
Ankatoky ny fety Manome tolotra zakan’ny rehetra ny Baolai
Rehefa ankatoky ny fetin'ny faran'ny taona toy izao dia ny milina mandeha amin'ny herinaratra no mahasarika ny besinimaro.
Mitombo ireo manao SOS Lafo loatra ho an’ny Malagasy ny fitsaboana
Araka ny fampitam-baovaon’ny fianakaviany, tratry ny tsy fahasalamana mafy i Fabrice Rakotondrabary izay raim-pianakaviana ary tsy maintsy hatao handalo fandidiana na “intervention
Misy olana eny Mandroseza Ahiana hisotro rano maloto Antananarivo
Nihotsaka babangoana manatona ny fiangonana sy ny sekoly katolika ao Mandroseza ilay toerana heverina fa hanary rano maloton’ny JIRAMA nivarina any Ikopa.
Fenoarivo Atsimondrano Nirongatra ny lozan’ny Sprinter
Ora roa mahery ny elanelany. Nitrangana lozam-pifamoivoizana roa samy hafa tamin’ny lalam-pirenena voalohany, omaly tolakandro.
Tsy fandriampahalemana Hiarony fiaran’Ambatondrazaka ny mpitandro filaminana
Nofaritana ny tetikady hotanterahin’ny zandary ao anatin’ny Faritra Alaotra-Mangoro hiarovana iny lalam-pirenena iny mandritry ny fety faran’ny taona sy ho amin’ny hoavy.
Fisolokiana teny 67 HA Tra-tehaka ireo roalahy mpivarotra vovo-bolamena hosoka
Roa tamin’ireo telo lahy nisoloky vovo-bolamena tamina vehivavy iray no tratran’ny polisy, ny alakamisy teo.